Omby avy amin’ny faritra fiavian’ny Sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena mihitsy no nanaovan’ireo dahalo latsak’alina. Efa any ambaravaran’ny mpamosavy no manoko sikidy ireo malaso. Nitrangana halatra omby miisa telo tao amin’ny fokontanin’Ambodihady, kaominina Ambohimanga Rova, distrikan’Antananarivo Avaradrano. Tokony ho tamin’ny 3 ora sy sasany marainan’ny zoma 5 Jolay teo no nitrangan’ny fangalarana ireo biby fiompy ireo. Tsy voafaritra ny isan’ireo dahalo , raha ny loharanom-baovao. Navoakan’izy ireo an-tsokosoko tao
anaty vala mantsy ireo omby ireo. Novakian’ireo olon-dratsy tamin’ny fomba tsy re tsaika tao ny vavahadin’ilay vala ary efa maraina vao tsikaritr’ireo tompony fa very tao ny biby mpitarika
saretin’izy ireo. Vokany, tsy nisy ny maty sy ny naratra. Rehefa naharay ny fampitam-baovaon’ny lasibatra ireo mpitandro filaminana avy ao amin’ny tobim-paritry ny zandariamariam-pirenena avy ao
Ambohimanga Rova dia tonga nanao ny fitsirihina. Nanatanteraka ny fanarahan-dia avy hatrany izy ireo sy ny fokonolona avy ao an-toerana. Ny zandary avy eny Ambohimanga Rova no mandray an-tanana ny famotorana.